Ahoana no iasan'ny Amazon Sales Central?
Ireo mpivarotra an-tserasera izay manapa-kevitra ny hanangona ny vokatra ao Amazonia dia tokony hifidy eo amin'ny mpivarotra Amazon afovoany sy Amazon mpivarotra foibe. Ahoana no fomba hanompoan'ireo ivon-toerana ireo ary inona no mety hisy fiantraikany amin'ny safidinao? Ireo fanontaniana ireo no hamaliako ity lahatsoratra fohy ity. Hamarita ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpivarotra foibe sy mpivarotra foibe izahay ary hiresaka momba ny tombontsoa voalohany amin'ny roa tonta. Antenaina fa ity fampahalalana ity dia hanampy anao hahatakatra hoe iza no safidy tena miasa ho an'ny raharaham-barotra.
Misy safidy roa ihany ny azonao atao amin'ny fivarotana Amazon amin'ny sehatry ny varotra - toy ny mpivarotra (amin'ny teny hafa toy ny mpivarotra voalohany) ary koa ny mpivarotra (mpiara-miombon'antoka fahatelo). I Amazon dia niasa tamin'ny mpivarotra voalohany sy fahatelo - commercial appraiser. Mba hahatakarana izany fahasamihafana izany dia tokony ho fantatra aloha ny fomba hanavahana ireo mpivarotra sy mpivarotra.
Amin'ny maha mpivarotra voalohany anao, dia hampiasa ny Vendor Central ho mpivarotra na mpanamboatra. Amin'ny maha-mpivarotra anao, manangona ny vokatrao ho an'ny Amazonia ianao, ary Amazonia indray, mamerina ireo zavatra ireo eo ambanin'ny marika ho an'ny mpanjifa. Amin'izao tranga izao dia mahazo isan-jato amin'ny varotra i Amazon. Na izany aza, amin'ny alalan'ity programa ity, ny sambo rehetra sy ny fandefasana entana dia heverin'ny Amazon. Ireo zavatra izay nomen'ireo mpiara-miasa Vendor Central dia afaka manavaka ny marika hoe "Sambo avy amina Amazon-ndao."
Raha mpivarotra fahatelo ianao dia tokony hampiasa Amazon Sales Central. Ankoatra izany, amin'ny maha mpivarotra anao, azonao ampiasaina ny fahombiazan'ny Amazon Sellers (FBA). Tena mety izany satria araka ity programa ity, Amazon dia mandefa ny baikonao amin'ny tenanao manokana. Azonao atao ihany koa ny manatanteraka ny fizotran'ny fifamoivoizana amin'ny tenanao manokana..
Pros and Cons of Amazon Sales Central sy Vendor Central
Ireo mpivarotra an-tserasera izay te-handany farafahakeliny amin'ny alàlan'ny Amazon amin'ny Amazon dia hahafa-po amin'ny Amazon Seller Central. Izy io koa dia hanome anao fahafahana hametraka ny vidiny kely indrindra amin'ny vokatrao ary mijanona ho mpifaninana ao anatinao. Tombontsoa iray hafa koa dia azonao atao ny mametraka izay vidin'ny fiheveranao ny vokatrao. Midika izany fa raha te hampiroborobo ny hevitra momba ny kalita ianao dia afaka manao izany mora foana.
Ny Amazon dia manambara fa hanome ny vidim-panavotana farafahakeliny farafaharatsiny izy io. Na izany aza, ireo mpivarotra mampiasa ny Vendor Central dia afaka manohitra ity fanambarana ity satria raha ny marina dia tsy mahavita izany i Amazonia.
Araka ny voalazan'ny ambaratongam-pitondrana Amazon, ny mpivarotra hafa rehetra dia tokony hifanaraka. Midika izany fa raha vantany vao misy olona mampita vaovao Amazon momba ny vidiny ambany amin'ny vokatra manokana ivelan'ity sehatra ity, dia hidina ny vidin'ny vokatra. Sarotra ny hahazo Amazon hampiakatra ny vidiny any amin'ny MAP.
Raha ampitahaina amin'ny Vendor Central, ny mpiara-dia amin'i Seller Central dia manana fifehezana bebe kokoa amin'ny vidiny. Na dia izany aza, ho an'ireo izay mikatsaka fiaraha-miasa tsara amin'i Amazonia, ny Vendor Central dia manome fahafahana bebe kokoa.
Raha miresaka momba ny lisitry ny fanatsarana isika, Amazon Seller Central dia manome fahafaha-manao bebe kokoa. Azonao atao ny miova mora foana ny lohateninao, manamboara soso-kevitra amin'ny bala sy ny famaritana biletà ary manavao ireo sary.
Ho famaranana, te hilaza aho fa aleoko mampiasa Amazon Sales Central satria manome tombony sy fanohanana bebe kokoa. Ankoatra izany, manana fidirana tsy tapaka amin'ny serivisy mpanohana ahy aho.